Kutheni le nto kufuneka sibandakanye amanqatha ekudleni Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
1 Ngaba amanqatha alungile kwimpilo yakho?
2 Amafutha amahle
3 Iindidi zamafutha
Ngaba amanqatha alungile kwimpilo yakho?
Ixesha elide bekukholelwa ukuba amanqatha awabandakanywa ekutyeni. Oku kungenxa yokuba yabonwa njengotshaba lokutya okusempilweni, olunoxanduva lokutyeba kakhulu kunye nezinye izifo.
Kodwa ukuqhubela phambili kwizifundo zesondlo kungqina ukuba amafutha ahlukile kwaye oko kubizwa ngokuba ngamanqatha alungileyo kubalulekile kwimpilo. Ngokuchasene noko, ukuba kukho amafutha amabi angenabungozi empilweni.
Amafutha ayimfuneko ekusebenzeni kakuhle komzimba. Ifunyenwe kwimithombo yezilwanyana okanye yezityalo, zibalulekile ukubonelela amandla emzimbeni, ukongeza ekusebenzeni kolwakhiwo kunye nokwenziwa kwehomoni, ziyanceda ekusebenzeni kwamathumbu, ekukhuseleni iiseli, kulawulo lobushushu bomzimba kunye nasekuncedeni ukufunxa iivithamini
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba amanqatha okutya ngokwexabiso elichanekileyo ayanceda ekunciphiseni ubunzima kunye nokuqina kwemisipha.
Izakha mzimba ezikhoyo kuko konke ukutya, kubandakanya iziqhamo ezinjengeavokhado, kunye nentlanzi, amandongomane, ioyile eyongezelelweyo yeoyile, kunye neoyile yekhokhonathi.
Kukho iindidi ezahlukeneyo zamafutha, kubandakanya: amafutha, i-monounsaturated fats, i-polyunsaturated fats, i-omega-6 edumileyo kunye ne-omega-3, kunye ne-trans fats.
Imithombo yahlukile kwaye kufuneka sinike ingqalelo ekusetyenzisweni kwezona zilungileyo, sisoloko sikhetha imithombo enje nge-monounsaturated kunye ne-polyunsaturated, ukuba nje zifunyenwe kukutya okusempilweni.
Nangona kunjalo, ukusetyenziswa kwamafutha e-trans kufuneka kuthintelwe, kuba ukutya okufana neelekese, ukutya okuqhotsiweyo kunye nokutya okuneemveliso kunokubangela iingxaki zentliziyo. Ukungenisa kwayo kuphazamisa inqanaba le-cholesterol ye-LDL egazini, enokuthi ikhokelele kwimithambo evalekileyo kunye neengxaki ezahlukeneyo zegazi nezempilo ngokubanzi.